Fikarohana momba ny firaisana Alfred Higgins, mpandoko trano iray, lavo ivelan'ny tohatra, manandrana ny fiainana any an-danitra ary mandray ny torolalana amin'ny Fanahy ho an'ny Pub - Fikarohana Reincarnation
Loharano: Nampifandraisina tamin'ny alalan'ny feo mivantana mivantana avy amin'i Leslie Flint ny fifandraisana avy amin'ny maty tamin'ity tranga ity. George Woods sy Betty Green dia nanatrika nandritra ny fotoam-piraiketan-tsehatr'i Flint ny fotoam-pivoriana ary nanontany ireo maty izy ireo, izay niteny tamin'ny feo voajanahary. Nodinihin'i Neville Randall ireo rakitsoratra ireo ary namintina ireo fifanakalozan-kevitra tao amin'ny bokiny, Fiainana aorian'ny fahafatesana. Ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ilay lahatsoratra etsy ambany dia kely novaina mba hanatsarana azy kokoa.
Nizara i Alfred Higgins fa maty tamin'ny fianjeran'ny tohatra iray izy
Nandritra ny fivoriana fanamafisam-peo mivantana an'i Leslie Flint tamin'ny Oktobra 14, 1963, nisy fanahy tonga tao ary nilaza tamin'i Betty Greene sy George Woods fa ny anarany eo amin'ny fiainana dia Alfred Higgins ary nipetraka tany Brighton, England izy. Nanontany an'i Higgins i Betty hoe ahoana no nandalovany. Namaly i Alfred:
“Nanda taratasy aho. Tsy maty namono aho, fa tsy nahatsiaro tena ary maty tany amin'ny hopitaly. Mazava ho azy fa taona vitsivitsy lasa izay. Mpandoko sy mpanao haingo aho. ”
Dia nanontany i Ramatoa Green hoe: “Andriamatoa Ry zanabavy ambony, azonao atao ve ny milaza ny fihetsikareo momba ny fandehanana? Ahoana no nahitanao ny tenanao? ”
“Eny, tamin'izaho vao nahatsapa na nahatsapa ny zava-nitranga tamiko, nandry teo amoron'ny renirano aho. Tsy afaka namantatra izay nisy ahy aho. Tsy fantatro ilay toerana ary tsy afaka nieritreritra ny fomba nahatongavako tany aho. ”
Misy toromarika momba ny fanahy mampahafantatra an'i Alfred fa maty izy
“Avy eo aho nahita olona nanatona ahy nanao akanjo mitafy ahy izay toa moanina. Nanana fahazarana na akanjo lava izy ary nijery ho lehilahy tsara fanahy izy, ary tanora. Noheveriko ho tanora ho moanina izy. Raha ny marina, mazava ho azy, nieritreritra aho tamin'io fotoana io fa toa an'i Jesosy izy. Saingy tsapako fa mazava ho azy fa tsy avy eo. ”
Tonga izy dia nijanona teo anilako ary nilaza hoe: "Ah, tonga ianao."
"Tonga?" Hoy aho hoe: “Tsy dia haiko loatra izay tianao holazaina. Ny fantatro dia tsy fantatro ity toerana ity. Tena tsara tarehy io. ”
"Fantatrao ny matyo."
"Eny, maty ianao."
“Tsy maty aho. Ahoana no ahafahako maty? Tsy ho afaka hahita aho. ”
Nahatsiaro tena aho. "Jereo" hoy aho, "tsy maty aho. Matanjaka aho. ”
'Ah, "hoy izy," be dia be ny olona mieritreritra fa rehefa maty izy ireo dia tsy maninona na amin'inona na amin'inona. Miatrika fiainana tena misy ianao, araka ny fahitan'ny tenanao ny tenanao, toy ny zavatra fantatrao taloha. Ny fiainana ankoatry ny antsoinao hoe fahafatesana dia toe-tsaina. Mety ho somary malahelo ihany ianao noho ny toetranao. Saingy tsy sambatra ianao, ary azo antoka fa toa tsy haiko, araka izay lazaiko. Toa milamina sy malefaka ianao. Tsy manahy momba ny zavatra rehetra manokana ianao, sa ianao? ”
"Tsia" hoy aho, "nefa izao aho vao manomboka mahatsapa fa marina ny voalazanao. Ekeko ny asako fa somary manahy ny oloko aho. Mety ho manaitra mahatsiravina ho azy ireo izany, fantatrao. Tsy tadidiko ny hahafatesako. Tsy tadidiko intsony fa mianjera. Farafaharatsiny mba nahatsapa ho latsaka aho, ary tsy tsaroako intsony. ”
"Eny, mazava ho azy," hoy izy, "maty tany amin'ny hopitaly ianao."
Niverina niverina teto an-tany i Alfred hamangy ny vadiny, Ada
Hoy izy: "Te hiverina vetivety ve ianao vao hahita ny olonao?", Hoy izy. "Mieritreritra ve ianao fa hanampy anao izany?"
"Tsara izany", mahaliana, tsy izany ve? Tiako ny hahita azy ireo.
"Tsy handeha izy ireo," hoy izy, "tsy hahalala anao, fantatrao."
"Oh. Fa nahoana no tsy?"
"Eny," hoy izy, "tsy ho fantatr'izy ireo fa eo ianao satria tsy mahita anao ary tsy handre anao raha miresaka aminy ianao."
"Eny, tsy dia misy dikany loatra ny handeha amin'izany?"
"Eny, anao io."
“Handeha aho,” hoy aho. "Mety ho any Ada-izany ny vadiko-mety te-ho hitako ny fahasalamany."
"Tsara izany. Andao."
'Ahoana no hahatongavantsika any? "
"Miaraka amiko fotsiny ianao," hoy izy. “Handeha amin'ity lalana ity isika.”
Niakatra ity havoana ity aho ary nandeha tamin'ny lalana iray. Rehefa nandeha teny izahay dia hoy izy: "Raiso ny tanako."
Nahatsapa somary hafahafa aho, fantatrao. Nieritreritra aho fa toa somary mangina ahy izany mitazona ny tanan'ny olona toy izao. Nefa na izany aza dia mbola nilaza izy fa ny tanany no notazoniko.
Toa hafahafa toa izany, fa raha vao nikasika ny tanany aho dia nanjavona tsikelikely ny zava-drehetra. Toy ny hoe handeha hatory aho, amin'ny karazana fomba, nefa tsy matory. Ny tsy fahaizako ny fahalalana sy ny fahatsapana ireo zavatra manodidina ahy sy ny manodidina ahy. Lasa tsy mahatsiaro tena aho.
Ny zavatra fantatro manaraka fa nijoro tao an-dakozianay aho, ary nijery ny vadiko aho. Nijoro teo ambonin'ilay fantsakana izy nibolisatra ovy. Nieritreritra aho fa manontany tena raha fantany fa eto aho, ary nantsoiko ny anarany. Tsy henony aho.
Hoy ny namako: "Tsy handre anao izy.
“Eny ary, tsy fantatro. Inona no azoko atao? ”
“Tsy misy azonao atao. Saingy mety hahatsapa ny fanatrehanao izy. Tsy ho hainao mihitsy io. Andraso kely aloha izao. ”
Ny fanahy manaova hafatra amin'ny velona na dia eritreritra aza
"Dia hoy izy tamiko."
“Ampifantohy aminy ny eritreritrao. Mieritrereta tsara fotsiny. Mieritrereta fatratra araka izay azonao atao. Eritrereto ny anarany. ”
Nataoko. Ary niaraka tamin'izay dia nitsangana izy ary nijery. Nidina ny antsy ary ovy efa voalazany izy, ary nijerijery izy. Faly be izy nijery azy, saika natahotra.
Somary nanenina aho tamin'ny fomba izay natahotra azy. Vantany vao nivoaka avy tao amin'ny lakozia izy. Nosokafany ny varavarana, ary avy eo nikatona izany indray, dia nipetraka, nametraka ny lohany teo ambony latabatra ary nanomboka nitomany.
Nahatsiaro mahatsiravina an'izany aho. Nieritreritra aho hoe: "Oh, malala izany."
"Aza manahy," hoy izy. “Tsapany. Fantany ao am-pony fa tsy mbola azony an-tsaina izany fa fantany ao fa efa akaiky anao izy. ”
"Raha izany, raha ataoko maharikoriko ny azy, tsy misy dikany izany?"
“Aza avela hanahy anao izany”, hoy izy, 'matetika izany no mitranga. Tsy mahalala na inona na inona izy ireo. Mbola tsy nolazaina ny amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana izy ireo. Saingy ho avy izy, mahatsapa, mahatsapa, ary lalina ao anaty ao, lalina ao anaty ao izy. "
“Tsy misy azoko atao ve?”
“Tsy misy”, hoy izy. “Tsy izao no fotoana. Tokony hiandry ianao. Mbola afaka manao zavatra ihany isika amin'ny manaraka. ”
"Inona ary no ataontsika izao?"
“Tsy mino aho fa mahavita zavatra tsara eto. Heveriko fa ny zavatra tsara indrindra dia ny miverina. ”
Alfred nangataka ny torolàlana nentiny mba hitondra azy any amin'ny Pub tranainy, hitsidika ny mariny
“Sady tsara.” Avy eo, dia hoy aho: “Fa te-handeha amin'ny toerana iray na roa alohan'ny hiverenantsika aho, raha mety.”
"Eny, aiza ianao no te handeha?"
Nieritreritra aho hoe: "Te-hahita namana vitsivitsy aho."
"Mieritreritra ny hiditra an-gazety ve ianao?" Nihomehy izy rehefa niteny izany. “Tsy mampaninona anao ve aho?” Hoy aho. "Somary fanontaniana hafahafa ho ahy ny mangataka anjely iray hamonjy pub."
"Oh, matetika izahay miditra pobiana sy toerana," hoy izy, "ary tsy anjely aho."
“Izaho dia teo ambany fiheverana fa hatramin'ny nahatongavanao teto, hajaina fatratra ary izany rehetra izany dia tsy maintsy ho ianao. Fa hitako fa tsy manana elatra ianao. ”
Nihomehy indray izy.
"Mazava ho azy," hoy izy, "tsy manana elatra ianao. Izany no hevitra taloha tratry ny mpivavaka maro be eto an-tany. ”
Nahatsiaro ho maivamaivana mahafinaritra izy ary nahatsapa ho voalahatra taminy. Hoy aho hoe: "Te handeha amin'ity gazety ity aho."
Nihevitra ny tenako fa ho somary gaga ihany satria tsy hainy hoe aiza ny toerana misy ny pub ary tsy fantatro ny fomba hahatongavako ao irery, tsy toa ny toerana misy ahy ankehitriny, tsy misy vatana vatana toa anao antsoy izany.
"Fantatro izay eritreretinao," hoy izy. “Eritrereto fotsiny ilay toerana, akimpio ny masonao, dia ho eo izahay.”
Nieritreritra aho hoe, "Tsy tsara izany." Dia naninjitra ny tanany tamiko izy. Nieritreritra aho hoe: "Eritrereto fa napetrako teo an-tanany ny tanako." Ka nataoko izany.
Nataon'i Alfred ny sakaizany tsy ho faty
Ny zavatra manaraka fantatro dia nijoro tao an-dohan'ity pub ity aho, ary tao ny telo amin'ireo sakaizako taloha. Niakatra aho ary nitsangana teo anilan'ny iray, ary izay tadidiko dia tadidiko ny zavatra nasaina nataoko momba ny vady - tokony hifantoka sy hieritreritra mafy. Nataony teny am-bavany io mason-kafe io, ary nieritreritra ny tenako aho, ary vetivety dia natsipiny teo amin'ny lampihazo izany. Toa somary taitra be izy.
Nijery manodidina izy ary nilaza tamin'ny namany, ireo namako roa hafa: “Mampihomehy izany. Nahatsapa aho fa nandre, nahatsapa fa nandre… ”
"Tsy efa naheno ve ianao?"
"Tsia, tsy nahare na inona na inona izahay."
Nihomehy izy ireo ary niteny hoe: “Fa maninona ianao mivady? Nahazo ny vazivazy ianao? ”
Saingy tsy nihaino ahy fotsiny izy. Natao tamin'ny eritreritro izany. Ny zavatra voalohany fantatro dia ny hoe tsy mila miresaka ianao mba ho maheno. Mila mifantoka mafy ianao. Maha-mieritreritra ny saina mandritra ny fotoana rehetra tianao te hifandray, na te-hanao zavatra ianao, dia afaka ny hanao izany. Tsy afaka ny hanao izany ianao amin'ny fitenenana amin'ny fomba taloha, fantatrao. Io no lesona voalohany nataoko tamin'io karazana io.